International Movie Archives - Page5of 8 - YTV
Home » Programs » International Movie » Page 5
? မင်းသားကြီးဗန်ဒိမ်းရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို မျှော်နေတဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ဒီတခါမှာတော့ ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီနော်…. ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး ဒီပစ်ခတ်မှုအပြီးမှာတော့ သေလုမျောပါးနဲ့ လူနာတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဒီလူနာကိုကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်မှာပဲ လူဆိုးဂိုဏ်းက ရောက်ရှိလာပြီး လူနာကို သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ အတိုက်အခိုက်အကြမ်းအရမ်းတွေနဲ့ […]
ဗီဒီယိုတိပ်ကို ကြည့်ရှုမိသူတိုင်းသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေကို စုံစမ်းတဲ့ သတင်းထောက်လေးတစ်ဦးရဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေကို ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ အကြောင်းကို သည်းထိပ်ရင်ဖိုခံစားကြည့်ရှုရမှာပါ………. ? ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုကျိန်စာတွေရှိနေတာလဲ…? ?‍♂️ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေတာလဲ…? ဒီသတင်းထောက်လေးရော ဒီကျိန်စာကနေ လွတ်ပါ့မလား…? […]
September 15, 2020 2:20 am
အမေရိကန် ၊ ရုရှား နှစ်နိုင်ငံကြားက မာဖီးဂိုဏ်းတွေကိုရဲ့ အားပြိုင်မှုကိုကြည့်ရမယ့် မှုခင်းအက်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်.ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အဆုံးသတ်က လှပမှုတွေရှိနေပါ့မလား…? ❓ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက ဘယ်လောက်ထိ မှန်ကန်နိုင်ပါ့မလား….? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်း တွေကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့မယ့် “One […]
မြန်မာ Sukkies လေးတွေအတွက် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် မင်းသား lee jong-suk မွေးနေ့မှာ သူရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ကိုရီးယား အက်ရှင်ဒရာမာ ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “V.I.P.” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်……… ?? […]
အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအကြိုက်တွေ့မယ့်နေ့လေးကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်…လှည့်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေ ထွက်တတ်တဲ့ ဂန်းစတားကြီး Danny Ocean ကတော့ အတော်ဆုံး (၁၁) ယောက်ကိုစုစည်းကာ လက်စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့ မှာ ရှိတဲ့ အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံ ၃ ရုံကို လုယက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ […]
September 13, 2020 8:43 am
အယုံကြည်ဆုံးဆိုတဲ့သူတွေဆီက သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်.ပရိသတ်ကြီးရေ..ဒီနေ့တော့ အမေရိကန် တက္ကဆက်ပြည်နယ်လေးက အရမ်းလှတဲ့ “Galveston” မြို့လေးက ရှုခင်းတွေနဲ့ အတူ အကြမ်းအရမ်းအက်ရှင်တွေကို ခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားလေးကို အတူတူကြည့်ရအောင်နော်…… ? ပိုက်ဆံရရင် အကုန်လုပ်တဲ့ ကြေးစားလူမိုက်ကြီးတစ်ယောက် သစ္စာ၊ […]